Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Martsa 2017 à 08:16
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Aprily 2014 à 05:29 (hanova)
(Pejy voaforona amin'ny « NY NIANDOHAN’NY FIANGONANA ADVANTISTA TETO MADAGASIKARA Niandoha tany Maurice ny niandohan’ny fahatongavan’ny hafatra teto Madagasikara. Niala tao Po... »)
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Martsa 2017 à 08:16 (hanova) (esory)
Tamin’ny 1918 dia nisy misionera mpampiely boky atao hoe Antoine TUYAU nandray kalesin-dalamby avy any Toamasina hankany Antananarivo Tafara-toerana tamin’ny Inspecteurn’ny Sekoly Protestanta André RASAMOELINA izay vao avy nanao ny asany tany Toamasina izy. Velona ny resaka teny an-dalana ary dia nampita ny fahamarinana taminy i TUYAU ka gaga sy talanjona ingahy RASAMOELINA. Nasehony azy ireo boky maro nentiny toy ny « Tragédie des siècles » sy ny « Steps to Christ » (Ny Dia ho eo amin’i Kristy). Nangatahiny tamin’i TUYAU ny adiresin’ny foiben’ny asantsika hahafahany mangataka alalana handika ny boky « Ny dia ho eo amin’i kristy. » amin’ny teny Malagasy.
Ho setrin’izany dia nalefan’ny Conférence Générale ho azy ny vola $800 hanampiana azy miaraka amin’ny boky sy gazety maro toy ny « Present Truth » (Fahamarinana ankehitriny). Voadikany sy voatontany ny boky tamin’ny volana jona 1919. Nanokatra kiosk / Librairie kely tao Andravoahangy izy ary teo no nivarotana ireo boky « Ny dia ho eo amin’i Kristy » ireo. Io kiosk io no loharano nampipariaka ny hazavan’ny fahamarinana teto Madagasikara. Sonian’olona folo anefa no ilaina vao afaka manangana Fiangonana ka teo am-pvarotanapivarotana io boky io no natsipitsipy ny resaka ary izay liana ka nazoto dia noraisina ho mpikambana.
Nampalahelo anefa fa maty novonoin’olona tao an-tranony tao Anjiro i Antoine TUYAU kanefa ny rà nalatsany no vao maika lasa zezika nampitrembona sy nampirobona ny voan’ny Fahamarinana teto Madagasikara.
Tamin’ny taona 1933 dia novidiana ny tranon’ny mpaka fo iray tao Ambohijarovo ary dia natao fiangonana sy foiben’ny asa. Nanao kaonferansa nandritra ny herintaona sy tapany ny Pastitora RABARIJOEL. Malaza tamin’izany ny kaonferansa « Ny ho avy mamirampiratra ». Be ny vokatra ka dia nitady toerana hafa hanitarana ny asa. Dia natsangana ny tao Mandrosoa - 50 Làlana Andriandahifotsy handraisana ireo mpino vaovao tamin’ny 1933.
1934 : nosokafana ny Sekoly Advantista teo Ankadifotsy izay nampitondraina ny anarana heo MARANATA taty aoriana. Araka ny torohevitry ny Fanahin’ny Faminaniana (1872) dia tokony haorina eny ambanivohitra ny Sekolintsika. Koa tamin’ny 1938 daiadia naorina ny Kolejy tany Soamanandrariny. Natao ny fiofanan’ny mpampianatra evanjelistra (Instituteurs Evangeliste) koa ny Kolejy ka nahitana mpianatra maro hatrany Afrika.
Tamin’ny 1947 no nanomboka ny fandaharana amin’ny teny frantsay tao amin’ny Radio Tananarive tao Antaninarenina ny Pasitora Jean ZURCHER, Talen’ny Kolejy. Nanao fandaharana 146 momba ny fanabeazana nosoratan’i Maurice TIECHE sy fitoriana Soratra Masina tao izy. Nandimby azy tamin’ny teny Malagasy ny Pasitora RABARIJOEL Jerôme sy RAJOELISON nanomboka ny 1949. Nosokafana tamin’izany koa ny Imprimerie Adventiste tao Soamanandrariny izay nanampy betsaka tamin’ny fampielezana ny hafatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/798522"